Vaovao Avy Amin’ny Tontolon’ny Blaogy Sinoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2018 14:12 GMT
1. Songom-barotra Am-blaogy: Namidy tamin'ny songom-barotra (lavanty) tao amin'ny blaogy ofisialy (tamin'ny teny ZH) ny T-shirt iray nosoniavin'ireo mpandray anjara tamin'ny CnBloggerCon. Ho fandraisana anjara amin'ny tetikasa asa soa roa an-tambajotra ireo vola azo: Simling Library sy 1KG. Afaka mamoaka ao amin'ny blaoginy ireo blaogera ary avy eo mampiasa ilay trackback mba hanolorana vidiny. Niakatra avy any amin'ny 20 ka hatramin'ny 700 ny vidiny tao anatin'ny alina iray monja. Afaka nojerena an-tambjotra ihany koa ireo failo ppt momba ireo kabary tao amin'ny CnBloggerCon.
2. Fitorahana Blaogy iarahana: Fangatahan'ny ESWN, ilay Blaogy Teny Anglisy an'i Anti sy i Simon World hiarahana manoratra sy hanasàna blaogera. Toy ny nolazain'i Roland avy ao amin'ny ESWN, manasa ireo vahiny ”mitovy hevitra” izy ireo. Samy mifantoka amin'ny lohahevitra mifandray amin'i Shina avokoa izy rehetra.
3. Kisary Famantarana ny Lalao Olaimpika: Navoaka am-pahibemaso ireo Kisary Famantarana ny Lalao Olaimpika any Pekin 2008 ary andiana kisaryfamantarana 5 antsoina hoe ”Ireo Mpinamana Dimy’‘. Maro ny fanehoankevitra naroso mba hahafantarana hoe mety ve izany. Misy koa karazany maro samihafa ao amin'ny aterineto.
4. Tafatafa Fanadihadiana BBC: Tamin'ny antso an-tariby, nanadihady blaogera vitsivitsy izay ahitana an'i Wangjianshuo ny BBC. Namoaka ny zavatra niainany tamin'ny fifandraisany tamin'ny haino aman-jery vahiny izy. Na izany aza, maro ireo blaogera tsy faly tamin'izany satria nilaza izy fa sorena tamin'ilay resaka fanasivanana izay angamba ny diary fototra ho an'ireo olona maro mpifandray amin'ny BBC.
5: Tantara Fohy Mikasika Ny Blaogy Sinoa: Nanomboka nanangona ireo antsipirihany sasany ary nanoratra andiana lahatsoratra maro natokana ho an'ny tantaran'ny blaogy sinoa (amin'ny teny ZH) i Sayonly, ao anatin'izany ny fomba nivoaran'ny tontolon'ny blaogy nanomboka tamin'ny nampidirana azy tamin'ny 2002.
6: WSIS: Nanatrika ny fihaonan'ireo mpitondra tenin'ny WSIS i Issac Mao . Toy ny navoakan'i Ethan Zuckerman, mino izy fa ”ankehitriny, zava-dehibe kokoa noho ny fahalalahana miteny ny fahalalahana mireritreritra ”. Nizara ny tontolon'ny blaogy Sinoa ho sokajy maro araka ny fandinihany tamin'ny fitsidihany an'i Shina i Rebecca Mackinnon, izay tao anatin'ireo mpitondra teny ihany koa.
7: Sehatra Fifanakalozan-kevitra momba ny Haino Aman-jery An'Aterineton'i Shina: Nifarana tao Hangzhou ilay Sehatra fifanakalozan-kevitra Fahadimy momba ny Haino Aman-jery An'aterineton'i Shina. Nanao sonia tolokevitra iray mangataka ireo tranonkalam-baovao handray anjara amin'ny fametrahana fiarahamonina mahafinaritra ireo mpiasam-panjakana sy matihanina, toy ny notaterin'ny China Digital Times. Ny teny hoe ”fiarahamonina mahafinaritra” no teny fahita matetika tao amin'ny gazety ofisialy Sinoa tamin'ity taona ity.
8. Blaogy 4.5 tapitrisa: Niresaka mikasika ny fanadihadiana (rohy tapaka) izay nanombana fa misy blaogy 4.5 tapitrisa voakarakara matetika i Fons Tuinstra.